Umgangatho wentsimbi kunye nokwenza imveliso Abavelisi - China Isimbi yentsimbi kunye nokulungisa ababoneleli kunye neFektri
HRB400 Isarha yentsimbi kulwakhiwo
I-rebar yentsimbi ikwabizwa ngokuba yibha yesinyithi eshushu eshushu. Ukutshisa okutsha okuqiniswe ngokutsha kwesinyithi kuphawulwe yi-HRB kunye nendawo encinci yesivuno. H, R, B ngokulandelelanayo ukuthumela umlingisi oshushu, uRibbed, uBar wentsimbi (iiBhari) amagama amathathu okuqala oonobumba besiNgesi.
I-A80 ye-Steel Truss Lattice Girder yeCarport
I-greyder ye-A80 yesakhiwo sesinyithi yindlela yokuxhasa isinyithi, efumaneka phantsi kophahla ukunika inkxaso. Ngokubanzi, iindonga zophahla zenziwe ngezinto ezimbini, isinyithi kunye nemithi.
I-truss yensimbi eneensimbi zentsimbi njengesixhobo esingasentla, isitshixo esisezantsi kunye namalungu ewebhu kwaye adityaniswe yindawo yokuxhathisa indawo ebizwa ngokuba yintsimbi. Itreyini yentsimbi eyenziwe ngezakhiwo zentsimbi lukhetho oluqhelekileyo phakathi kwezentengiso, ezamashishini kunye neendawo zokuhlala ezinkulu.